Gym သှားဖို့ အခြိနျမရသူတှအေတှကျ ဝမျးဗိုကျ အဆီတှကေစြမေယျ့ 15 မိနဈစာ လကေ့ငျြ့ခနျးမြား
HomeKnowledgeGym သှားဖို့ အခြိနျမရသူတှအေတှကျ ဝမျးဗိုကျ အဆီတှကေစြမေယျ့ 15 မိနဈစာ လကေ့ငျြ့ခနျးမြား
အမရေိကနျနိုငျငံမှာ လူတဈယောကျဟာ တဈနကေို့ အလုပျလုပျခြိနျ 8.06 နာရီ ရှိပါတယျ။ ပိတျရကျတှမှော 5.53 နာရီ အလုပျလုပျပါတယျ။ကနျြတဲ့အခြိနျတှကေို သှားတာ၊ လာတာ၊ သူငယျခငျြး၊ မိသားစုတှနေဲ့ အခြိနျကုနျကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ gym သှားဖို့ ဆိုတာက အိပျမကျတဈခုလိုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ gym မသှားနိုငျရငျ တဈရကျကို 15 မိနဈ ပုံမှနျအခြိနျပေးရုံနဲ့ အံ့ဩစရာ ရလဒျတှကေို ရလဒျတှကေို ရလာမှာပါ။
1. နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ ခန်ဓာကိုယျက အဆီတှကေဖြို့ လိုအပျပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ ဓာတျလှကေားနဲ့ တကျမယျ့အစား ရိုးရိုးလှကေားကိုပဲ သုံးပါ။ မကွာခငျမှာ ခန်ဓာကိုယျက ပေါ့ပါးလာပါတယျ။ တဈနကေို့ 15 မိနဈခနျ့ လှကေားအတကျအဆငျး ပွုလုပျတဲ့အခါ လတှကွောလာတဲ့အခါ ဗိုကျခပျြလာတာကို တှရေ့မှာပါ။
2. ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို ရုံးမှာလညျး လုပျလို့ရပါတယျ။
- ထိုငျခုံပျေါမှာထိုငျပွီး ခွထေောကျကို မ ထားပါ။ ပွီးတော့ ဒူးကို ရငျဘတျနားထိရောကျအောငျ ကှေးလိုကျ၊ ခွထေောကျကို ပွနျဆနျ့တနျးလိုကျနဲ့ 15 မိနဈကွာ ပွုလုပျပါ။
3. ထိုငျခုံပျေါမှာ ဘေးစောငျးလှဲခလြိုကျပွီး လကျတဈဖကျကို ကွမျးပွငျပျေါမှာ ထောကျထားပါ။
- ပွီးရငျ ခွထေောကျနှဈဖကျလုံးကို မွောကျလိုကျခလြိုကျလုပျပါ။
- ညာဘကျပွီးရငျ ဘယျဘကျပွောငျး လုပျပါ။ ကွာလာတဲ့အခါ ဝမျးဗိုကျမှာ ကွှကျသားတှေ ထှကျလာတာကို မွငျရမှာပါ။
4. ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက အတျောထိရောကျမှု ရှိပါတယျ။ အိမျမှာ TV ကွညျ့ရငျးနဲ့လညျး လုပျလို့ရပါတယျ။
- ညီညာတဲ့ကွမျးပွငျပျေါကို လဲလြောငျးလိုကျပါ။
- ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ခေါငျးနဲ့တနျးတနျး အနအေထားရောကျတဲ့အထိ မွောကျလိုကျပါ။ ခကျြခငျြးကွီး မွောကျလို့မရသေးရငျ ခွထေောကျကို ရသလောကျပဲ မွောကျပါ။ ပွီးရငျ ခွထေောကျကို ကွမျးပွငျပျေါ ပွနျခပြါ။
- တဈကွိမျကို အခါ 20 နဲ့3ကွိမျ ပွုလုပျပါ။
5. ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက ခကျခဲခငျြခကျခဲ နပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ gym သှားသလိုပဲ အတျောကို ထိရောကျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးကို 45 ဒီဂရီဖွဈအောငျ ထိုငျလိုကျပါ။
- ခွထေောကျကို မလိုကျပွီး ခွထေောကျနဲ့ လကျကို တဈပွေးညီ ဆနျ့တနျးလိုကျပါ။
- ပွီးရငျ လကျခြောငျးတှနေဲ့ ခွခြေောငျးတှကေို ထိပါ။
- မူလအနအေထားအတိုငျး ပွနျနပေါ။ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈနေ့ 15 မိနဈ လုပျတဲ့အခါ တဈလအတှငျး ထူးခွားလာမှာပါ။
6. ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးက အဆီတှကေို လငျြလငျြမွနျမွနျ ကစြမှောပါ။
-ကွမျးပွငျပျေါမှာ ခန်ဓာကိုယျကို 45 ဒီဂရီဖွဈအောငျ ထိုငျပါ။
- ခွထေောကျကို မ လိုကျပွီး ခွထေောကျနဲ့ လကျကို တဈပွေးညီတညျးဖွဈအောငျ ဆနျ့တနျးလိုကျပါ။
- စုထားတဲ့လကျနှဈဖကျကို ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဘယျဘကျကို လှဲလိုကျ၊ ညာဘကျကို လှဲလိုကျ လုပျပါ။
Gym သွားဖို့ အချိန်မရသူတွေအတွက် ဝမ်းဗိုက် အဆီတွေကျစေမယ့် 15 မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်းများ
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို အလုပ်လုပ်ချိန် 8.06 နာရီ ရှိပါတယ်။ ပိတ်ရက်တွေမှာ 5.53 နာရီ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်တွေကို သွားတာ၊ လာတာ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် gym သွားဖို့ ဆိုတာက အိပ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် gym မသွားနိုင်ရင် တစ်ရက်ကို 15 မိနစ် ပုံမှန်အချိန်ပေးရုံနဲ့ အံ့ဩစရာ ရလဒ်တွေကို ရလဒ်တွေကို ရလာမှာပါ။
1. နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေကျဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဓာတ်လှေကားနဲ့ တက်မယ့်အစား ရိုးရိုးလှေကားကိုပဲ သုံးပါ။ မကြာခင်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က ပေါ့ပါးလာပါတယ်။ တစ်နေ့ကို 15 မိနစ်ခန့် လှေကားအတက်အဆင်း ပြုလုပ်တဲ့အခါ လတွေကြာလာတဲ့အခါ ဗိုက်ချပ်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။
2. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို ရုံးမှာလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
- ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီး ခြေထောက်ကို မ ထားပါ။ ပြီးတော့ ဒူးကို ရင်ဘတ်နားထိရောက်အောင် ကွေးလိုက်၊ ခြေထောက်ကို ပြန်ဆန့်တန်းလိုက်နဲ့ 15 မိနစ်ကြာ ပြုလုပ်ပါ။
3. ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ဘေးစောင်းလှဲချလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ထောက်ထားပါ။
- ပြီးရင် ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကို မြောက်လိုက်ချလိုက်လုပ်ပါ။
- ညာဘက်ပြီးရင် ဘယ်ဘက်ပြောင်း လုပ်ပါ။ ကြာလာတဲ့အခါ ဝမ်းဗိုက်မှာ ကြွက်သားတွေ ထွက်လာတာကို မြင်ရမှာပါ။
4. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက အတော်ထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။ အိမ်မှာ TV ကြည့်ရင်းနဲ့လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
- ညီညာတဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို လဲလျောင်းလိုက်ပါ။
- ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ခေါင်းနဲ့တန်းတန်း အနေအထားရောက်တဲ့အထိ မြောက်လိုက်ပါ။ ချက်ချင်းကြီး မြောက်လို့မရသေးရင် ခြေထောက်ကို ရသလောက်ပဲ မြောက်ပါ။ ပြီးရင် ခြေထောက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ပြန်ချပါ။
- တစ်ကြိမ်ကို အခါ 20 နဲ့3ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။
5. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ခက်ခဲချင်ခက်ခဲ နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် gym သွားသလိုပဲ အတော်ကို ထိရောက်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို 45 ဒီဂရီဖြစ်အောင် ထိုင်လိုက်ပါ။
- ခြေထောက်ကို မလိုက်ပြီး ခြေထောက်နဲ့ လက်ကို တစ်ပြေးညီ ဆန့်တန်းလိုက်ပါ။
- ပြီးရင် လက်ချောင်းတွေနဲ့ ခြေချောင်းတွေကို ထိပါ။
- မူလအနေအထားအတိုင်း ပြန်နေပါ။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့ 15 မိနစ် လုပ်တဲ့အခါ တစ်လအတွင်း ထူးခြားလာမှာပါ။
6. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းက အဆီတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် ကျစေမှာပါ။
-ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို 45 ဒီဂရီဖြစ်အောင် ထိုင်ပါ။
- ခြေထောက်ကို မ လိုက်ပြီး ခြေထောက်နဲ့ လက်ကို တစ်ပြေးညီတည်းဖြစ်အောင် ဆန့်တန်းလိုက်ပါ။
- စုထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ကို လွှဲလိုက်၊ ညာဘက်ကို လွှဲလိုက် လုပ်ပါ။